Aeroflot dia manafoana ny sidina Bangkok rehetra noho ny loza ateraky ny habakabaka ao Afghanistan
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Aeroflot dia manafoana ny sidina Bangkok rehetra noho ny loza ateraky ny habakabaka ao Afghanistan
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Tsy azo atao intsony ny mividy tapakila avy any Moskoa mankany Bangkok ny volana septambra na oktobra amin'ity taona ity amin'ny tranokala Aeroflot.
Nampiato ny serivisy fiaramanidina Bangkok ny mpitatitra saina Rosiana.
Aeroflot dia misoroka ny habakabaka ao Afghanistan, ny sidina famaky Thailand.
Nankatoavin'i Thailand ny fidirana amin'ny fizahan-tany Rosiana.
Nanafoana ny sidina mankany renivohitr'i Thailand, Bangkok ny mpitatitra saina Rosiana Aeroflot, noho ny loza ateraky ny habakabaka ao amin'ny Repoblika Islamikan'i Afghanistan.
Tsy azo atao intsony ny mividy tapakila avy any Moskoa mankany Bangkok ny volana septambra na oktobra amin'ity taona ity amin'ny Aeroflot tranokala. Ny famandrihana sidina ao Bangkok dia misokatra hatramin'ny 21 aogositra 2021.
Mampihomehy, nanambara ny manampahefana Thai androany fa nahazo alalana sahady ny mpizahatany rosiana miditra any Thailand miaraka amin'ny taratasy fanamarinana ny vaksinin'ny COVID-19 miaraka amin'ny vaksinin'ny Sputnik V vita Rosiana.
Talohan'izay, ireo mpandeha tsy manana taratasy fanamarihana ny vaksinin'ny COVID-19 nataon'ny vaksinin'ny tandrefana ekena maneran-tany, toa an'i Moderna, Pfizer na AstraZenica, dia voatery nandalo quarantine roa herinandro tsy maintsy atao.
Amin'izao fotoana izao, ny lanitra manerana an'i Afghanistan dia mampidi-doza tokoa noho ny hetsika mpampihorohoro Taliban, izay naka fahefana tany amin'ny repoblika.
Ny alahady 15 aogositra, ny renivohitra Afghanistan, Kabul, dia lavon'ny fanafihan'ny Taliban. Ankehitriny dia misy resaka ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Kabul Hamid Karzai, satria vahoaka marobe ao an-toerana izay manandrana manidina ivelan'ny firenena, mba handositra ny fanjakan'ny Taliban.
Ny sidina mivoaka an'i Kabul dia somary mandalo ary mandeha sy miverina tsy tapaka satria 'mampiato' ny sidina rehetra hiala ny tanàna ny Taliban.